विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षका लागि नियुक्त भएको हुँ, राजीनामा दिन्न भने पछी अब के हुन्छ त? – GALAXY
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षका लागि नियुक्त भएको हुँ, राजीनामा दिन्न भने पछी अब के हुन्छ त?
काठमाडौं । सरकारले राजीनामा मागेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रतिकृया जनाउनु भएको छ । उहाँले राजीनामा नदिने जवाफ फर्काउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई राजीनामा दिन भन्नु भएको थियो ।
तर, शाक्यले तत्काल राजीनामा नदिने र सरकारले हटाए अदालतमा जाने बताउनु भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको भन्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्री भुसाललाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । निवर्तमान सरकारबाट नियुक्ति पाउनु भएका शाक्यलाई कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने तयारी भइरहेको छ ।
उहाँले राजीनामा नदिए स्पष्टीकरणमार्फत् हटाउने तयारीमा ऊर्जामन्त्री भुसाल हुनुहुन्छ । ओली सरकारले घिसिङको कार्यकाल सकिएको झण्डै पाँच महिनापछि २७ माघ २०७७ मा सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।